Xakamaynta Tayada - Ganacsiga OUZHAN (SHANGHAI) CO., LTD
Sababta ay Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd. awood ugu yeelatay inay faa'iido joogto ah ka sameyso Shanghai in ka badan toban sano, waxaan u maleyneynaa inay qasab tahay inay tahay tayada iyo xirfadeena wanaagsan.
Shirkadeena waxay maal galisaa lacag aad u tiro badan sanadkasta si ay si isdaba joog ah u soo iibsato qalabka casriga ah ee tijaabada ah una sameyso tababar joogto ah iyo qiimeynta shaqaalaha imtixaanka. Dhammaan dadaallada ayaa ah in la siiyo macaamiisha alaabada ugu tayada fiican
Waxaan si adag u aaminsanahay in tayada ay soo horeyso, taas oo waliba aaminaada shirkadeena. Waxaan u maleyneynaa in tayada kaliya ay guuleysan karto macaamiisha raali ahaantooda, ma ahan qiimo jaban.
Waxyaabaha soo socdaa waa nidaamkayaga tijaabada guud:
Ogaanshaha otomaatiga ah
Xulashada macmalka ah
Ogaanshaha kama dambaysta ah
Soo saar warbixinta
Qiyaasaha wax soo gelinta: Waxaan leenahay mashiin si toos ah ogaanshaha Japan, sidaa darteed waxaan u baahanahay oo kaliya inaan soo galino cabirka sheyga ee baaritaanka.
Ogaanshaha otomaatiga ah: Mashiinka wuxuu si otomaatig ah u ogaadaa alaabada cilladaysan iyo alaabooyinka u qalma sida ku cad xuduudaha soo gelinta.
Selection Xulashada Artifishalka: Wax soo saarka aqoonta leh ee lagu soo xulay mashiinka baaritaanka otomaatigga ah wuxuu u baahan yahay in markale gacanta lagu tijaabiyo.
Dete Ogaanshaha kama dambaysta ah: Alaabada gacanta lagu tijaabiyay ugu dambayntii tijaabada ugu dambaysa ayaa lagu marin doonaa qolka tijaabada.
Soo saarista warbixinta: Ka dib markaan ka gudubno imtixaanka ugu dambeeya, waxaan u soo saari doonnaa warbixin tijaabo xirfadeed macaamiisha ah.